Rugby : voavaha ny olana, omena kianja vaovao ny RCTS | NewsMada
Rugby : voavaha ny olana, omena kianja vaovao ny RCTS
Par Taratra sur 20/07/2017
Nivaha ihany ny olana nahazo ny Rugby Club Tanora Soavimasoandro (RCTS), teo amin’ny fanefena ny kianja hitaizany ireo ankizy beazina amin’ny taranja baolina lavalava, eny Imamba. Hita ny marimaritra iraisana eo amin’izy ireo sy ny orinasa Prim Immobilier, nahazo izany fotodrafitrasa izany. Nanaiky ity farany fa hanome kianja vaovao, ho an’ny RCTS, izay mirefy 1 ha 75 a, hanohizan’ity klioba ity ny fitaizana ireo tanora. Hanaraka ny fenitra tanteraka izany, izay hahitana efitrano fisoloana akanjo sy fidiovana. Mitentina 70 tapitrisa Ar ny tetibidin’izany fotodrafitrasa vaovao, ho an’ny RCTS Soavimasoandro, izany. Noho ny fanelanelanana nataon-dRakotonirina Alain, raiamandrenin’ny rugby, ny nahitana izao vaha olana, teo amin’ny roa tonta izao.
Natao, omaly teny Imamba Soavimasoandro, ny fifanarahana sy fanaovan-tsonia eo amin’ny roa tonta : ny Prim Immobilier, andaniny, notarihin-dRandrianasolo Solofo, ary ny RCTS Soavimasoandro, ankilany, tamin’ny alalan’ny filohany, Avotra Tokiniaina sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra.
Nahafaly ireo raiamandrenin’ireo ankizy beazina ao amin’ny RCTS izao vaha olana izao. Marihina fa mahatratra 300 mianadahy mahery eo ireo kilonga tezaina ao amin’ity sekolin’ny baolina lavalava, ao Imamba Soavimasoandro, ity.